Sidaad Ugu Adeegsato Falanqaynta Astaanta Sifeynta Aragtida Suuqgeynta Adag | Martech Zone
Khamiis, Maarso 5, 2015 Khamiista, Noofembar 5, 2015 Douglas Karr
Tirada dhibcaha taabashada ee aad macaamiisha kula macaamilayso - iyo siyaabaha ay ula kulmaan sumaddaada - ayaa qarxay sannadihii la soo dhaafay. Waagii hore, xulashooyinku way fududahay: waxaad socodsiisay xayeysiis daabacan, mid warbaahineed oo laga baahiyo, laga yaabee inaad toos u dirto waraaqaha, ama xoogaa isku dhafan. Maanta waxaa jira raadinta, muujinta khadka tooska ah, warbaahinta bulshada, moobiilka, baloogyada, goobaha isku-darka, liistaduna way sii socotaa.
Markii la kordhiyay dhibcaha taabashada macaamiisha ayaa sidoo kale waxaa soo kordhay baaritaanka ku saabsan waxtarka. Waa maxay qiimaha dhabta ah ee doollar lagu kharash gareeyay wax kasta oo dhexdhexaad ah? Dhexdhexaad noocee ah ayaa ku siinaya garaaca ugu badan ee galkaaga? Sideed u kordhin kartaa saameynta aad horay ugu sii socoto?
Mar labaad waagii hore, cabirku wuxuu ahaa mid fudud: waxaad socodsiisay xayeysiin, waxaadna qiimeysay farqiga u dhexeeya wacyiga, taraafikada iyo iibka. Maanta, is-weydaarsiga xayeysiinta ayaa bixiya aragti ku saabsan inta qof ee guji xayeysiiskaaga oo yimid meeshii aad dooneysay.
Laakiin maxaa dhacaya markaa?
Falanqaynta qaabka waxay ku siin kartaa jawaabta su'aashaas. Waxay isku soo ururin kartaa xog laga helay ilo kala duwan oo kala duwan oo labadaba gudaha ganacsigaaga iyo dibadiisaba marka laga hadlayo wacyigalinta macaamiisha. Waxay kaa caawin kartaa inaad go'aamiso kanaalada ugu kharashka badan soo saarista mugga jawaabaha. Tan ugu muhiimsan, waxay kaa caawin kartaa inaad aqoonsatid macaamiishaada ugu fiican kooxdaas isla markaana aad wax ka qabato macluumaadkaas adoo ku hagaajinaya istiraatiijiyadda suuqgeynta si waafaqsan horay u socodka.
Sideed uga faa'iideysan kartaa falanqaynta sifo si wax ku ool ah oo ka soo go'do faa'iidooyinkaas? Waa tan daraasad kiis deg deg ah oo ku saabsan sida hal shirkad u sameysay:
Kiiska Isticmaalka Falanqaynta Astaanta
Shirkad wax soo saarka mobilada ayaa suuq geynaysa codsi u ogolaanaya dadka isticmaala inay abuuraan, dib u eegaan oo ay wadaagaan dukumiintiyada aalad kasta. Bilowgii, shirkaddu waxay hirgelisay dhinac saddexaad Analytics aalado leh dashboodyo horay loo sii dhisay si loola socdo qiyaasaha aasaasiga ah sida soo dejinta, xisaabinta maalinlaha / billaha ah, waqtiga lagu qaatay barnaamijka, tirada dukumiintiyada la sameeyay, iwm.
Hal Qeexid Falanqeeye Kuma Habboona Dhammaan
Markii kororka shirkaddu qarxeen oo ay isticmaaleyaashooda tiradoodu kor u kacday malaayiin, habkan hal-ku-habboon-dhan ee fikradaha ah ma uusan cabirin. Dhinacooda saddexaad Analytics adeegyadu ma xamili karin is-dhexgalka xogta waqtiga-dhabta ah ee laga helo ilo badan sida diiwaanada barxadda adeegga, taraafikada websaydhka iyo ololeyaasha xayeysiinta.
Waxaa intaa dheer, shirkaddu waxay u baahnayd inay falanqeyso sheegashada shaashado iyo wadiiqooyin kala duwan si ay uga caawiso inay go'aan ka gaaraan halka ku xigta ee suuqgeynta suuqgeynta ah ee ugu wanaagsan lagu bixin doono iibsashada macaamiisha cusub. Muuqaal caadi ah ayaa ahaa sidan: isticmaale ayaa arkay xayeysiiska shirkadda Facebook inta uu taleefankooda ku jiro, ka dibna wuxuu raadiyey dib u eegis ku saabsan shirkadda laptop-kiisa, ugu dambayntiina wuxuu riixay inuu ku rakibo barnaamijka xayeysiiska lagu soo bandhigay kumbuyuutarkooda. Ku-xirnaanshaha kiiskan wuxuu u baahan yahay kala-qaybinta sumcadda si loogu helo macaamilkaas cusub ee ka dhex socda warbaahinta bulshada moobiilka, raadinta / dib-u-eegista lacag-bixinta ee kombuyuutarka iyo xayeysiinta muujinta barnaamijka ee kiniiniyada.
Shirkaddu waxay u baahnayd inay wax sii kordhiso oo ay soo ogaato isha suuqgeynta ee internetka ka caawisay inay helaan adeegsadayaashooda ugu qiimaha badan. Waxay u baahdeen inay aqoonsadaan dabeecadaha isticmaalaha - wixii ka dambeeya ficil-gujinta-rakibaadda guud - oo iyagu gaar u ahaa barnaamijka isla markaana ka dhigay isticmaalaha mid qiimo ku leh shirkadda. Maalmihiisii ​​hore, Facebook wuxuu soo saaray qaab fudud laakiin awood leh oo tan lagu sameeyo: waxay ogaadeen in tirada dadka isticmaala "saaxiibo" dhowr maalmood gudahood oo isdiiwaangelintu ay ahayd saadaal weyn oo ku saabsan sida hawlgalayaasha ama qiimaha leh mustaqbalka fog ku jiri. Warbaahinta internetka iyo dhinac saddexaad Analytics nidaamyadu waa ku indha la 'yihiin noocyada noocan ah ee waqtiga-barakacay, ficilada isku dhafan ee ka dhaca barnaamijka.
Waxay u baahdeen caado falanqaynta sifo in shaqada la qabto.
Falanqaynta Astaanta ayaa ah Xalka
Bilaabidda si fudud, shirkaddu waxay gudaha u sameysay ujeeddo hore: inay si sax ah u ogaato sida qof kasta oo la siiyaa uu ula macaamilo wax soo saarkooda kalfadhi keliya. Markii taas la go'aamiyay, waxay ku sii dari karaan xogtaas si ay u abuuraan qaybo muuqaal ah oo macaamiisha ah iyada oo ku saleysan xaaladdooda bixinta isticmaaleyaasha iyo qadarka bil kasta ku baxa. Marka la isku daro labadan qaybood ee xogta, shirkaddu waxay awood u yeelatay inay go'aamiso macaamiisha la siiyay ' qiimaha nolosha - cabir qeexaya noocyada macaamiisha ee haysta dakhliga ugu badan. Macluumaadkaas, marka loo eego, wuxuu u oggolaaday iyaga inay si gaar ah u bartilmaameedsadaan isticmaaleyaasha kale - kuwa qabtay isla "qiime nololeed" - iyada oo loo marayo xulashooyin warbaahineed oo gaar ah, oo leh dalabyo aad u gaar ah.
Natiijada? Caqli badan, adeegsi xog badan oo dollar suuqgeyn ah. Kobaca sii socda. Iyo nidaam falanqayn u gaar ah lahaanshaha oo meel yaal oo kori kara oo la qabsan kara markay shirkaddu horay u socoto.
Falanqaynta Astaanta Guusha
Markaad bilawdo inaad dhex gasho falanqaynta sifo, waxaa muhiim ah in marka hore lagu qeexo guusha ereyadaada - oo laga dhigo mid fudud. Isweydii, yaan u arkaa macmiil fiican? Ka dib weydii, maxay yihiin ujeedooyinkaygu macmiilkaas? Waad dooran kartaa inaad kordhiso qarashka isla markaana aad u xoojiso daacadnimada macaamiishaada qiimaha-sare leh. Ama, waxaad dooran kartaa inaad go'aamiso halka aad ka heli karto macaamiisha qiimaha badan sida iyaga oo kale. Runtii adiga ayey kugu xidhan tahay, maxaase ku habboon ururkaaga.
Marka la soo koobo, falanqaynta u yeelashadu waxay noqon kartaa hab aad dhakhso leh oo fudud oo layskugu soo ururin karo xog laga helo dhowr ilo gudaha ah iyo dhinac saddexaad ah, isla markaana macno u yeesho xogtaas iyada oo loo eegayo sida gaarka ah ee aad sida gaarka ah u go'aamiso. Waxaad kaheli doontaa fikradaha aad ubaahantahay inaad si cad u qeexdo oo aad ula kulanto ujeedooyinka suuqgeyntaada, ka dib istiraatiijiyaddaada si aad ugu guuleysato ROI-ga ugu sarreeya ee suurtagalka ah suuq kasta oo suuq geyn ah.
Waa maxay keydka xogta Adeeg ahaan
Waxaan dhawaan wax ka qornay sida teknoolojiyada xogta ayaa sii kordheysa ee suuqleyda. Bakhaarrada keydka xogta waxay bixiyaan bakhaar dhexe oo miisaamiya isla markaana siiya aragti weyn dadaalkaaga suuq-geyn - kaas oo awood u siinaya awoodda aad ku keeni karto macaamiil aad u tiro badan, macaamil ganacsi, xog maaliyadeed iyo suuqgeyn. Adoo ka duulaya xogta qadka tooska ah, khadka tooska ah iyo mobilada ee keydka warbixinta dhexe, suuqleydu waxay awoodaan inay falanqeeyaan oo helaan jawaabaha ay u baahan yihiin markay u baahdaan. Dhisida bakhaarka xogta waa hawl u taal shirkadda celceliska - laakiin Bakhaarka Xogta ee Adeeg ahaan ah (DWaaS) wuxuu xalliyaa arrinta shirkadaha.
Ku saabsan Bakhaarka Macluumaadka BitYota Adeeg ahaan
Qoraalkan waxaa lagu qoray caawimaadda BitYota. Bakhaarka Macluumaadka BitYota ee xalka Adeeggu wuxuu madax xanuunka ka qaadaa inuu yeesho oo maareeyo madal kale oo xog ah. BitYota waxay u suurta galisaa suuqleyda inay si dhaqso leh u kaydiyaan bakhaarkooda xogtooda isla markaana shaqeeyaan, iyagoo si sahal ah ugu xiraya daruur bixiye iyo qaabeynta bakhaarkaaga. Teknolojiyaddu waxay u adeegsataa SQL in ka badan tiknoolajiyada JSON si ay si fudud u weydiiso bakhaarkaaga oo ay ula timaaddo xogta waqtiga-dhabta ah ee loogu talagalay falanqaynta degdegga ah.
Mid ka mid ah kahortagayaasha ugu waaweyn soonka Analytics waa baahida loo qabo in la beddelo xogta ka hor inta aan lagu keydin adiga Analytics nidaamka. Adduunyada ay codsiyada si joogto ah isu beddelaan, xogta ka timaadda ilo kala duwan, iyo qaabab kala duwan, waxay ka dhigan tahay in shirkaduhu ay inta badan is helaan iyagoo waqti badan ku bixinaya mashaariicda isbeddelka xogta ama wajaha jabay Analytics nidaamyada. BitYota waxay kaydisaa oo ay falanqeeysaa xogta qaabkeeda hooyo sidaa awgeedna waxay meesha ka saareysaa baahida loo qabo hawlgallada isbeddelka xogta ee foosha xun, waqti qaadashada. Ka takhalusida isbeddelka xogta waxay siisaa macaamiisheenna soon Analytics, dabacsanaanta ugu badnaan, iyo dhammaystirnaanta xogta. BitYota
Marka baahiyahaagu is beddelaan, waxaad awoodi kartaa inaad ku darto ama ka saarto noodhadhka koox-kooxeedkaaga ama aad u beddesho qaabeynta mashiinka. Xal ahaan si buuxda loo maareeyay, BitYota kormeera, maamulo, qodobbada, iyo miisaanka xogtaada, si aad diiradda u saarto waxa muhiimka ah - falanqaynta xogtaada.
Tags: falanqayntadhacafalanqaynta sifobityotaquudinta xogtakeydka xogtabakhaarka xogta adeeg ahaanaragtida suuq-geyntaxogta dhabta ah ee quudinta